Shiinaha Iphise Tamarta Tamarta Soo Saarista iyo Warshad | MOLONG
Laba Habka Xakamaynta Ilaha Dijitaalka Dijitaalka ah ee mashiinnada Tattoo-ga ee bixinta Aaladda Tattoo ee Tattoo ee Casriga ah
1. Awoodda korontadu waxay leedahay batoon waqti, guji si aad u dejiso bilowga iyo joojinta, saxaafadda dheer saddex ilbidhiqsi si ay eber u nadiifiso
2. Marka lagu daro ama laga jaro badhamada, saxaafadda dheer waxay si isdaba joog ah isugu dari kartaa una yareyn kartaa danab.
3. Hayso talaabo dheer iyo orod laba hab oo aad ku beddelato.
4. Afar badhan ayaa loo dhigi karaa si loo badbaadiyo shaqada danab-afaraad.
5. Beddelaad qaab laba-geesood ah
6. Shaqada xusuusta
7. Shaqaynta waqtiga
MOLONG TATTOO SUPPLY waa soo saare qalab farshaxan sameeye ah oo ku jira arimahan sanado badan. Waxaan KELIYA ku siineynaa alaab tayo sare leh sicirka tartamada waxaanan bixinaa adeegga iibka kadib. Waxaan bixinaa xulasho ballaaran oo gulufyada tattoo, tuubooyinka tattoo-tuurka la tuuri karo, talooyinka taatikada, qabashada tattoo, cirbadaha sawirka, mashiinnada sawirka, xirmooyinka tattoo, sahayda awoodda tattoo, sahayda daloolinta iyo qalabka tattoo. Waxaa naga go'an inaan sameyno badeecooyin tayo sare leh oo aan siino hubin tayo leh. Waxaan joogsaneynaa hormarinta qaababka cusub.
1. Maxuu noqon lahaa baakadaha?
Ku xirxirida calaamadeena, xirxirida dhexdhexaadka ah, xirxirida OEM (Haddii tiro badan la codsado, waxay ku dhejin karaan astaantooda xirmada, la gorgortami karo)
2. Sidee tayada noqon laheyd?
Waxaan dammaanad ka qaadaynaa alaabooyinka ay heli doonaan inay dhammaystiran yihiin, nadiif yihiin, si fiican u shaqeeyaan.
Kormeeraha Warshadda ayaa xaqiijin doona in baakadaha ay ku jiraan xaalad wanaagsan ka hor rarka. Intaas waxaa sii dheer, dhibaato kasta oo aad la xiriiri karto MOLONG gadaal-iibinta, waxaad xaqiiqdii heli kartaa jawaabta iyo xalka.
3. Waa maxay qiimaha aan hayno?
Qiimaha warshadda. Waxaan nahay soosaarayaal, waxaan soo bandhigi karnaa sicirro tartan ah. Gaar ahaan jumladleyda, qiimo dhimis qaas ah oo loogu talagalay iyaga si looga caawiyo inay suuqyadooda si dhakhso leh u ballaadhiyaan.
4. Sideen ku heli karaa tijaabada?
Ma la gorgortami karaa Caadi ahaan ma bixinno shaybaarro bilaash ah. Xaalado yar gudahood macaamiisha waa inay bixiyaan kharashka rarka, waxaanna u dirnaa shaybaarro xajin, cirbado iyo qaar ka mid ah qalabyada. Macaamiisha suurtagalka ah, waxaan u fidineynaa qiimo dhimis gaar ah.
5. Mudo intee le'eg ayuu rarku qaadanayaa?
Si aad ugu dirto Express sida DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS iwm, badanaa 3-10 maalmood,
Si markab loogu raro, waxay qaadataa inta u dhexeysa 15 iyo 45 maalmood.
Waxay kuxirantahay sababaha tirada amarka, wakiilka, masaafada, iyo nidaamka nadiifinta ee caadooyinka, iwm.
6. Maxay yihiin hababka lacag bixinta?
T / T (wareejinta bangiga), Western Union, Paypal, bixinta hubinta Alibaba, Alipay Iwm.
Hore: Qaabab tayo sare leh oo xardhan Tattoo Power oo aan siibiil ahayn Bixinta Tamarta Tattoo ee Multifunctional Digital
Xiga: MO wireless ku amraya koronto Tattoo